« Asa goavana » -
AccueilTresaka« Asa goavana »
« Asa goavana »
12/07/2018 admintriatra Tresaka 0
Mafimafy ihany ny asa miandry an’izay ho ben’ny tanàna vaovao handimby an-dramatoa Lalao Ravalomanana. Ho sarotra ny hanala ireny olona nahavita nanangana trano tsy ara-dalàna erak’Antananarivo ireny. Tsy ho mora ihany koa ny hanala ireo mpivarotra amoron-dalana izay toa vao mainka nahazo vahana noho ny gaboraraka. Nanararao-paty tamin’iny hetsika teo amin’ny Parvis Analakely iny koa mantsy ireo mpivarotra amoron-dalana ka ny nahamay azy ireo voalohany dia ny fanitarana ny ambaindain’ny tsenany eny an-dalambe.
Misy aza ny efa mamadika ny “trottoir” ho trano vy sy trano maharitra azo ivarotana mihitsy. Endriky ny gaboraraka hita eto amin’ny tanànan’Antananarivo avokoa izany.
Fa tsy ho mora ihany koa ny hamerina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana eto Antananarivo Renivohitra ho lavitry ny posy sy ny sarety entin-tanana. Ny ankamaroan’ny fitohanana dia vokatry ny sarety tarihana andian’olona maromaro ary raha sanatria misy miteny ny tokony hakan’izy ireo sisiny, dia vavabe sy fandrahonana fitsaram-bahoaka no valiny. Nisy kolontsaina tia herisetra nambolena mihitsy tao anatin’ireny sokajin’olona mindrana ny araben’Antananarivo ireny. Tsy ho mora ny hamerenana azy ireo amin’ny laoniny sy hampiharana ny lalàna amin’izy ireo.
Ny fitantanana an’Antananarivo iray manontolo mihitsy no marary, ka asa goavana no miandry izay handimby ilay ben’ny tanàna ankehitriny. Tao anatin’izay fotoana nitondran’ity ben’ny tanàna ity izay dia tsy mba nisy zavatra tsara mba nahalalana sy nahafantaran’ny olona (na eto an-toerana na any ivelany) izany kaomina Antananarivo Renivohitra izany.
Ity renivohitra ity anefa no fitaratr’i Madagasikara, ka raha izy no osaosa dia malemy tahaka izany koa ny fahitan’ny rehetra an’i Madagasikara. Ben’ny tanàna mba hijery ny tena fampandrosoana ilay Renivohitra no tokony hofidian’ny mponin’Antananarivo , fa tsy hosodoka amin’ny teny hoe “ Neny” ary avy eo mimenomenona rehefa tsy hanaovany na inona na inona. Mimenomenona mantsy ny sasany ankehitriny fa hoe variana amin’ny fanabeazam-bohon’ny antoko Tim ilay ben’ny tanàna tokony hampandroso. Angaha tokoa moa nampanantena fampandrosoana ho an’ny vahoakan’Antananarivo izany Lalao Ravalomanana izany? Tsy nanana praograman’asa ange izy fa ilay teny hoe “Neny” iny no nentiny nambaboana ny rehetra.